गाई हत्या प्रकरण : रातारात नक्कली पत्र, घटना थप रहस्यमय !
गाई हत्या प्रकरण : रातारात नक्कली पत्र, घटना थप रहस्यमय !
सुर्खेत - दैलेखमा गाई मगाइएको देखाउन रातारात नक्कली पत्र तयार पारिएको छ। छानबिनलाई प्रभावित गर्न र घटनालाई मोड्न जिल्ला समन्वय समिति दैलेखले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासँग गाई मगाएको नक्कली पत्र तयार पारिएको हो।
नेपालगन्ज उपमहानगरले आठवटा ट्रकमा पठाएका दुई सय ९१ वटा गाई बिहीबार राति सुर्खेतमा भीरबाट खसालिएका थिए। त्यहीक्रममा ४० वटा गाईगोरु मरेका थिए। यस्तै दर्जनौं गाईगोरु घाइते छन्। दैलेखको श्रीस्थान क्षेत्रबाट माग भएको भन्दै नेपालगन्ज उपमहानगरले ति गाईगोरु पठाएको थियो। दैलेखका सबै स्थानीय तह र श्रीस्थान मन्दिर व्यवस्थापन समितिले यसअघि नै ति गाईगोरु आफूहरूले नमगाएको स्पष्ट पारिसकेका थिए।
तर घटनाको एक साता पुग्नै लाग्दा जिल्ला समन्वय समिति दैलेखले उपमहानगरसँग गाई मगाएको नक्कली पत्र तयार पारेपछि घटना थप रहस्यमय बनेको हो। नेपालगन्ज उपमहानगरले गठन गरेको छानबिन टोली मंगलबार दैलेख पुगेको थियो। टोली फिर्ता भएसँगै जिससले उपमहानगरसँग गाई मगाएको पत्र सार्वजनिक भएको हो। जिससको नाममा रातारात पत्र बनाएर गाई मगाइएको देखाएपछि दैलेखका स्थानीय तह पनि आश्चर्यमा परेका छन्।
घटनाको एक सातासम्म केही नबोलेको जिससले एकाएक गाई मगाइएको पत्र सार्वजनिक गरेपछि घटनामा मिलेमतो भएको स्थानीयको आशंका छ। यतिसम्म की गाई मगाइएको भन्ने पत्र सार्वजनिक भएपछि जिससका सदस्य र कर्मचारी नै आश्चर्यमा छन्। जिसस दैलेखले भदौ ८ गते उपमहानगरलाई गाई माग्दै पत्र पठाएको देखिन्छ। पत्रमा जिससका प्रमुख प्रेमबहादुर थापा र उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी शाहको हस्ताक्षर छ। जबकी अरुबेलामा यस्ता पत्रमा जिल्ला समन्वय अधिकारीले हस्ताक्षर गरी पठाउँथे। तर यसमा प्रमुख र उपप्रमुख दुबैले हस्ताक्षर गरेकाले पनि यो पत्र रातारात तयार पारिएको देखिन्छ।
भदौ ६ गते मात्र जिससको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठक र त्यसअघिका कुनै पनि बैठकमा नेपालगन्जबाट गाई मगाउनेबारे कुनै छलफल, प्रस्ताव र निर्णय नभएको जिसस सदस्य ललित माझीले बताए। उनले भने, ‘जिससको बैठकमा गाई ल्याउने एजेण्डामा छलफल भएकै थिएन्, तर एक्कासी गाई मगाएको भन्ने पत्र सार्वजनिक भयो। खै हाम्रा प्रमुखले के गर्नुभएको हो, हामीलाई त थाहा छैन्।’
गाई मगाइएकोबारे जिससका कर्मचारी पनि अनविज्ञ छन्। निमित्त समन्वय अधिकारी पदमबहादुर सापकोटाले गाई मगाइएको पत्रबारे अनविज्ञता प्रकट गरे। कर्मचारीलाईसमेत जानकारी नहुनुले पनि गाई मगाइएको पत्र रातारात तयार पारेको भन्ने स्थानीयको आरोपलाई पुष्टी गरेको छ।
जिससको पत्रमा नारायण नगरपालिका र अन्य स्थानीय तहमा व्यवसायिक गाईपालनका लागि गाई उपलब्ध गराउन भनिएको छ। तर नारायण नगरपालिकाका मेयर रत्नबहादुर खड्का भन्छन्, ‘हामीले गाई मागेकै थिएनौं, जिससले पनि हामीलाई जानकारी दिएको थिएन। एकाएक गाई ल्याउन किन खोजियो ? ’
नगरभित्र रहेका गाई व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेका बेला नेपालगन्जबाट गाई ल्याउने भनरे अनावश्यक रूपमा नगरपालिकालाई मुछ्ने काम भएको बताए। जिससले गाई मगाइएको भन्ने पत्र सार्वजनिक भएसँगै स्थानीय तहका पदाधिकारी र श्रीस्थान मन्दिर व्यवस्थापन समितिले जिससका पदाधिकारीले व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न नक्कली पत्र तयार पारेको आरोप लगाएका छन्।
माग, स्वीकृत र अनुमति एकैदिन !
यो घटनासँग सम्बन्धित पत्रको मिति एकैदिन छ। जिसस दैलेख, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले एकैदिन पत्र काटेका छन्।
अर्कोतर्फ जिसस दैलेखको चलानी पुस्तिकामा पनि शंका गर्ने ठाउँ छ। चलानी दर्तामा जिससले भदौ ८ गते नै उपमहानगरलाई पत्र पठाएको देखिन्छ। तर भदौ ११ गतेपछि ८ गतेका केही पत्र चलानी गरिएका छन्। भदौ ५ गतेसम्म क्रमिकरूपमा रहेको चलानी पुस्तिकामा भदौ ८ पछि चलानी भएका पत्रको दर्ता मिति तलमाथि गरी राखिएकाले पनि गाई मगाईको पत्र रातारात तयार गरेको पुष्टी हुने जिससकै एक कर्मचारीले बताए।